फैशनेबल महिला धनुष - गर्मी 2016
2016 को गर्मी को फैशनेबल महिला धनुष धेरै विविध र असामान्य रंगीन हो। यो समय मोनोक्रोम र गाढा पोशाकहरू बिर्सनु र उज्ज्वल कपडाहरू संग अलमारीलाई बिर्सने समय हो।
सबै भन्दा फैशनेबल धनुष र गर्मीको 2016 को सेट
तपाइँलाई मनपर्ने शैली कुन बाहेक, आधुनिक फैशनको प्रवृतिको लागी, तपाईं सजिलैसँग धनी र बोल्ड छविहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
फैशनेस्टियसहरूको लागि जोजल शैलीको शैली मनपर्छ, धेरै रोजाई विकल्पहरू छन् तपाईंको दैनिक अलमारीको विविधता दिन। 2016 को गर्मीमा फैलिएको कमरको साथ फेस जीन्स स्कुलमा छोटो, 7/8, ग्रुनज। ट्रेंड यस्तो असामान्य विवरण भएको छ, जस्तै फ्रिंग, जो प्यान्ट टिनको तल वा लालटेन को रूप मा स्थित हुन सक्छ। यो अविनाशकारी वा रंगीन हुन सक्छ, र फरक सामग्री बनाइयो। यो उपन्यास तातोपानी र मौलिकता को चित्र जोड देगा। यदि हामी पतलून बारे कुरा गर्छौं - यसले कुनै कटौतीलाई अनुमति दिएको छ। मुख्य चीज रङलाई जोड दिइन्छ। पैंटहरू राम्रोसँग संतृप्त टोन छनौट गर्न सकिन्छ। यो विकल्प अफिसको लागि र हिंड्ने लागि उपयुक्त छ। जीन्स र पतलून कुनै स्टाइलिश शीर्ष संग पूर कंधा वा पेट संग पूरै सकिन्छ। फ्लोन्स, धनु र विस्तृत हल्का आस्तीनसँग हल्का हल्का कपडाहरू।
स्कर्टको सबैभन्दा लोकप्रिय कट "धूप" थियो। स्कर्ट-सूर्य कार्यालय धनुको उत्कृष्ट विवरण बन्न सक्छ। यो गर्न, यो बर्फ-सेतो ब्लाउज वा जैकेटको साथ जैकेट पहने हुनुपर्छ। बन्द जूताहरू र स्टाइलिश हैंडबैग व्यवसायिक छविको लागि उत्कृष्ट अन्त हुनेछ। तर यदि तपाई ड्रेस कोडमा कडाता पछ्याउनु पर्दैन - उडानको कपडा र नाजुक पातलो छान्नुहोस्। यो सम्झनाको लायक छ कि स्कर्टको यस्तो कटनी हिप क्षेत्रमा केहि अतिरिक्त सेन्टिमिटर लुकाउन सक्षम छ। र यदि, यसको विपरीत, एक पतली केटी हिप्स मा फोकस गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि छोटो अगाडि हेम संग स्कर्ट गर्नेछ। खुला जूताहरू यसका लागि एक उपयुक्त विकल्प हो।
पछिल्ला पछाडि, स्कर्ट-ट्रेपेजियम घुटिएको लम्बाइ र मिडी हो। तिनीहरू ज्यामितीय प्रिन्टहरूसँग मिनिमेस्टिक हुन सक्छन्, रेट्रो विवरणको साथ पूरै। सबै चीज तपाईंको प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ। तिनीहरू T-shirts, tops , T-shirts, शर्टहरूका साथ पहन सक्छ। मुख्य कुरा रंग हो, कपडाको हल्कापन र लेस छ कि यो वांछनीय छ।
2016 को गर्मीको मौसममा, पारदर्शी पोशाकहरू अत्यन्तै लोकप्रिय छन्। मुख्य कार्य कसरी सिक्न सकिन्छ कि उनीहरूलाई सही तरिकाले लुगा लगाउन। यो शरीर पूर्ण रूपमा पूर्ण गर्न हुँदैन, अन्यथा यो धेरै भ्रामक हुनेछ। Ruches, flounces र तहहरू अनुमति छ। माथिका आधारमा, जुत्ताहरू कम निस्सन्देह र पनीर हुन सक्छन्।
2016 को गर्मी को लागि फैशनेबल धनुषहरुको लागि केटीहरु
आनन्द र जो केटीहरु को लागी उनको पतला खुट्टा को दिखाना चाहते हो, र जो पुरुषहरु को स्तुति गर्न को लागी खुशी हो, मिनी स्कर्ट आए। तर नबिर्सनुहोस्: अश्लीलबाट बच्न, धेरै छोटो मोडहरू छनौट नगर्नुहोस्। अझै पनि, स्त्रीनिष्ठता पहिलो स्थानमा हुनुपर्दछ। धेरै मूल दृश्य स्कर्ट मेटाइएको आकारहरु। जूताहरू एकै रंगमा रोज्न सकिन्छ, त्यसपछि छवि उज्ज्वल र उज्ज्वल हुनेछ। यसलाई नरम गर्नको लागि, जैकेट वा ब्लोउजलाई चौडा आस्तीनसँग जोड्नुहोस्।
युवा केटीहरूले कम कमरको साथ प्यान्ट र जेन्स सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गर्न सक्दथे, तिनीहरूलाई छोटो शीर्षमा संयोजन गर्न सक्दछन्। यद्यपि फैशन र minimalism मा, तर सामानहरूको बारेमा नबिर्सनुहोस्। स्टाइलिश क्लच बैग, कंगन र बालुवा कहिल्यै असाध्यै हुनेछैन।
90देखि ग्रिड फेसबुकमा फर्केर आउनुभयो। फ्लोरहरू, फ्लो, माथि वा स्कर्टमा यसलाईबाट बनाइन्छ। सबैभन्दा प्रभावकारी ठूलो बुनाईका उत्पादनहरू हुन्। यदि तपाईं साहसी प्रयोगहरूदेखि डराउनु भएन र आफ्नो अनुहारको सुन्दरतामा विश्वास राख्नुहुन्छ भने त्यसपछि सुरक्षित रूपमा यस्ता लुगाहरू लुगा लगाउँनुहोस्। यो मामलामा सफलता सुनिश्चित हुनेछ!
डिजाइनर ओल्गा निकोशचेवा
फैशनेबल डाउन जैकेट - सर्दिया 2016
स्टाइलिश स्पोर्ट्स सूट 2013
महिलाहरु को टखने बूट - पतन 2013
इटालियन फैशन - पतन 2013
नाखून - 2016 पतन
स्नीकर्स एडिडास 2013
सर्दिस संग्रह एडिडास
घरमा राई काँटाबाट काभ्रे
गोभी र डिब्बाबंद माछा संग पाई
झिल्लीका लागि रेडवीट इन्टन्ट
पेरिस हिल्टन हराएको पोमेरियन स्पिट्जको लागि 10 हजार डलर तिर्नेछ
च्यानल शैली मा मैनीक्योर
ब्रान्ड धूप का चश्मा
कलाई मा 65 अविश्वसनीय प्रेरणादायक टैटू विचारहरू
थिएटरमा के जान्छ?
वृद्ध महिलाहरु मा मूत्र असामान्य
माइक्रोवेव ओवनमा आलु कसरी बनाउने?
समुचित लािका - नस्ल का वर्णन
Crow आक्रमणकारी व्यक्ति - एक चिन्ह
जर्ज क्लोनीले आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट दिए
के गर्न सकिन्छ एक नर्सिङ मा आमालाई?
सूरजमुखीमा फोटो खिच्न
आहार मार्गीता रानी
म मेरो अनुहारमा कचरा हटाउन कति चाँडै गर्न सक्छु?